By vijayafm on	 May 25, 2018 फोटो फिचर, बिचार, विविध खबर, स्थानीय, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
वर्तमान अबस्थामा बिश्वभरि देखिएका रोगहरुको प्रकृति हेर्ने हो भने पहिलेको भन्दा फरक देखिन थालेको छ । पहिले समस्यामा रहेका सरुवारोगहरूको समाधान त हुदै गए तरपनि बिश्वमा आज दीर्घरोगहरुको प्रकोप धेरै देखिन थालेको छ ।
अहिले देखिएका रोगहरुको शुष्म अध्यन गर्दा मुटुजन्य रोगको प्रकोप निकै बढेको देखिन्छ । बिकशित मुलुकहरुमा त झन् यसको प्रकोप बिकराल रुपमा देखिन थालेको छ । त्यसकारण, विभिन्न जनचेतना फैलाउने उदेश्यले बिश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत अन्य संग संस्थाहरुले मे १७ मा बिश्व उच्चरक्तचाप दिवस मनाउदै आएका छन् ।
आज हामीले उच्च रक्तचाप कम गर्ने केहि घरेलु उपायहरुको बारेमा जानकारी दिदै छौ ।
उच्चरक्तचाप कम गर्ने केहि खानेकुराहरु
१. कम चिल्लो भएको खानाको सेबनस् कम चिल्लो भएको खाना खाने गर्नाले हाम्रो रक्तचाप कम हुन सक्दछ । यसको अर्थ यो हो कि हामीले कोलेस्ट्रोल कम अथवा संतृप्त (सेचुरेटेड) फैट भएको खाना खानु पर्दछ । हामीले कम चिल्लो भएको खानेकुरा खाने बानि गर्नु भनेको उच्च रक्तचापको समस्या हुने जोखिम कम गर्नु हो । स्वस्थ मुटुको लागि हामीले मसलाको सेबन पनि कम गर्नु पर्दछ ।
२. नुनको सेबन कम गर्ने ः एउटा सानो प्रयास नै हाम्रो रक्तचाप कम गर्ने अचुक उपाय हुन सक्छ । नुनमा हुने सोडियम उच्च रक्तचापको प्राकृतिक शत्रु हो । त्यसकारण, नुनको मात्रा हामीले सकेसम्म कम गर्नु पर्दछ । हामीले दिनमा ३ ग्राम भन्दा कम नुन खानुनै उत्तम हुन्छ । यो तथ्यलाई बेलायत सरकारले अबलम्बन गरेर सोडियम कम भएको नुन प्रयोगमा ल्यायको छ जसबाट २५ प्रतिशत मुटुजन्य रोगहरु नियन्त्रण भएको दाबी पनि गरेको छ ।